काठमाडौँ, ४ जेठ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट बच्न पूर्वीय दर्शनमा आधारित जीवनशैलीलाई अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वाग्मती सफाइ महाअभियानको हामी साथ छौँ कार्यक्रमले आज जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको ‘के गर्ने ? के नगर्ने ?’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयुर्वेदका वरिष्ठ चिकित्सक डा ऋषिराम कोइरालाले पूर्वीय दर्शनमा आधारित भान्सा पद्धतिलाई पुनःस्थापित गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा मनोपरामर्शदाता कञ्चन रावतले अध्ययनले पाँचमध्ये चार जनालाई मनोसामाजिक समस्याले सताउने गरेको तथ्य पुष्टि भएको बताए । चिन्ता, निराशा, लागुपदार्थको दुव्र्यसन, घरेलु हिंसा, यौन हिंसा बढेको, मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कम रहेकाले पनि सचेत हुनुपर्ने कार्यक्रममा उनले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रेक्षा ध्यान शिक्षक किशोरसिंह शाहीले योग, प्राणायाम र ध्यानले महामारीका बेला शान्त रहन सहयोग गर्नाका साथै शरीरमा अक्सिजन आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणालीलाई सक्रिय राख्न पनि सहयोग गर्ने बताउँदै जुमबाटै अभ्याससमेत गराए । पूर्व मुख्यसचिव एवं वाग्मती सफाइ महाअभियानका मुख्य अभियानकर्मी लीलामणि पौडेलले दैनिक रुपमा प्राणायाम र योगको कार्यक्रमलाई जुमबाटै निरन्तरता दिइने प्रतिबद्धता जनाए । धेरैलाई सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी गराएर परोपकारी काम गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।
वाग्मती सफाइ अभियानकर्मी नारायण श्रेष्ठले साप्ताहिक रुपमा ‘के गर्ने ? के नगर्ने ?’ भन्ने विषयमा विज्ञबाट अन्तरक्रिया गरिने बताए । वाग्मती सफाइ महाअभियान आठ वर्ष पूरा भई नवौँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा बुधबार जुम प्रविधिबाटै विशेष कार्यक्रम गरिने जानकारी पनि सो अवसरमा गराइएको थियो ।